Al Shabaab oo soo bandhigtay Sargaal iyo Ciidamo la socday oo isku dhiibay + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
Al Shabaab oo soo bandhigtay Sargaal iyo Ciidamo la socday oo isku dhiibay + Sawirro
Kooxda Al Shabaab ayaa Degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhaxe waxa ay kusoo bandhigeen Sargaal la sheegay in uu katirsanaa Ciidamada Maamulka Jubbaland iyo ciidamoo ilaalo u ahaa oo dhankooda isku soo dhiibay.
Munaasabad ka dhacday Degmada Jilib ayaa lagu soo bandhigay sargaalka iyo ciidamada la socday ee isku dhiibay Xarakada Al Shabaab, waxaana munaasabadaasi ka hadlay sargaalka is dhiibay iyo xubno katirsan Al Shabaab.
Al Shabaab ayaa sheegtay in Col. Yaasiin Faarax Fiilo oo katirsanaa saraakiisha ciidamada Jubbalabd iyo sadex askari oo ilaalo u ahaa ay kasoo baxeen safka ciidamada maamulka ayna iskuna soo dhiibeen dhinacooda.
Yaasiin Faarax Fiilo oo ka hadlayay munaasabada lagu soo bandhigayay ayaa dsheegay in uu go’aansaday in iuu kasoo baxo Ciidamada Jubbaland iskuna dhiibo kuwa Al Shabaab , waxa uuna tilmaamay in uu ka damqaday dhibaatada ay ciidamada Kenya ku hayaan shacabka kunool Kismaayo iyo Duleedkeeda.
Maamulka Jubbaland ayaan wali ka hadlin warkan kasoo baxay Al Shabaab ee ku aadan in sargaal iyo ciidamo katirsan Maamulkooda isku dhiibeen dhinaca Al Shabaab, mana jiro ilo ka madax banaan Al Shabaab oo xaqiijiyay warkan.
REER GUURAAGU, SIDEE U SOO DHACSAN KARAAN XUQUUQDOODA DASTUURIGA AH?